पूर्व पेन्टेकोस्टल पास्टर माइकल Karlendal क्याथो | Apg29
उहाँले किनभने बाइबलीय विश्वस्तता को रूपाê
यसलाई तपाईं सुरक्षित छैन तपाईं क्याथोलिक चर्च विश्वास गर्नु हुँदैन। न त बचाउँछ Protestantism, तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास बचाउँछ।
क्याथोलिक चर्च छोडेर
पूर्व पेन्टेकोस्टल पास्टर माइकल Karlendal, परिवर्तित गर्ने अब चर्च छोडेर 2016 मा क्याथोलिक चर्च। एक मा आफ्नो ब्लग मा लामो पोस्ट , उहाँले यसो किन - एउटै ब्लग उहाँले पहिले बचाव र क्याथोलिक विश्वास प्रचारित छ।
लामो पोस्ट मा, त्यो अन्य कुराहरु, उहाँले एक क्याथोलिक भए किन लेख्छन्। उहाँले मुक्त चर्च, त्यसैले इतिहास-र थियो, क्याथोलिक चर्च मा "ऐतिहासिक जरा" छानबीन कि लाग्यो। यहाँ अनौठो कुरा हो। उहाँले आफ्नो ब्लग मा लेख्छन्:
"यो पनि यदि तपाईं क्याथोलिक चर्च मेल खान्छ तरिकामा बाइबल पढ्न सक्नुहुन्छ, तर यो विशुद्ध ऐतिहासिक कारण थियो, म एक क्याथोलिक भए गरे भनेर बाइबलीय कारण थिएन।"
उहाँले किनभने बाइबलीय विश्वस्तता को तर द्वारा परिवर्तित ऐतिहासिक कारणहरू । पहिले नै यो चेतावनी रोशनी रातो हुनुपर्छ।
मुक्तिको निम्ति के विश्वास?
फेरि इतिहास अध्ययन पछि, उहाँले आफ्नो धारणा परिवर्तन र क्याथोलिक चर्च सहमत गर्दैन निष्कर्षमा।
"अनि म अब क्याथोलिक प्रतिमान छोडेर प्रोटेस्टेन्ट फेरि विचार छ।"
मलाई यो एक क्याथोलिक कि सोच धेरै वर्ष को लागि पछि मात्र फेरि प्रोटेस्टेन्ट सोच्न अनौठो सुनिन्छ। (तपाईं शब्द बुझ्न भने प्रतिमान बताए छ यहाँ र यहाँ ।)
यो क्याथोलिक चर्च वा Protestantism चयन गर्न बारेमा छैन। यो येशूको वा छैन, सबै तपाईं बारेमा।
उहाँले चर्च परिवर्तन किन
म एउटा इमेल लेखे र यो Apg29 मा उहाँको बारेमा एउटा लेख प्रकाशित गर्न सबै सही थियो भने छक्क परे। उहाँले यो राम्रो भयो र उहाँले चर्च परिवर्तन किन मेरो मस्यौदा लेख पढ्न भइरहेको पछि, उहाँले केही थप व्याख्या आएका भनेर जवाफ दिए।
"मलाई लागि, यो सबै सधैं उहाँको इच्छाबमोजिम गर्न येशू निम्न र खोज्छन्। म एक क्याथोलिक बनेपछि एक कुरा भएको छ, यो किनभने म त क्याथोलिक चर्च वास्तवमा बस येशूले स्थापित कि चर्च थियो भन्ने दृढ विश्वास आएका थिए थियो आफ्नो शरीर बस, र त्यसपछि यो एक एकदम उचित हुनेछ भनेर येशूले अनुयायी येशूले के स्थापित छ को भाग हुन चाहनुहुन्छ रूपमा।
अब म गलत अघि थियो भनेर बुझे। येशूले मण्डली स्थापना भएको छ, र मण्डलीको बिस्तारै विशुद्ध संगठनात्मक र सैद्धान्तिक भताभुंग छ। तर अब विभाजित चर्च को शाखा को कुनै पनि मूल जरा वा स्टेम हुन दावी गर्न सक्नुहुन्छ। येशूले एक निश्चित विशिष्ट संप्रदाय पालन गर्न भनेर अर्थ सक्दैन निम्न। "
माइकल Karlendal राम्ररी पढ्न र बौद्धिक, धेरै सिकेका के मैले बुझेको छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा येशूमा विश्वास गर्न र सुरक्षित हो। तपाईं प्रभु येशू मा एक सरल बाइबलीय विश्वास छ भने, तपाईं त किनकी, "ऐतिहासिक चर्च" अधिकार प्राप्त गर्न खोज छैन छ यो सही।
म एक मसीही रूपमा गर्न प्रतिक्रिया रूपान्तरण क्याथोलिक चर्च। मसीही (पश्चात्ताप) रूपान्तरण एक चर्च (एक सुरक्षित छ जो व्यक्ति) के राम्रो छैन? तपाईं येशूलाई पश्चात्ताप र छैन एक चर्च।
आफ्नो जवाफ मलाई शब्द "रूपान्तरण" को मेरो विचारमा मेरो साथ माइकल Karlendal थियो।
रूपान्तरण "म यो एक अनौठो तरिका मा प्रयोग गरिन्छ कि सहमत तपाईंसँग" शब्द लागि जाँदा "। वास्तवमा, यो पालो अर्थ, र यो मात्र येशूलाई छ गर्छ। तर हामी शब्द मा एक अनौठो तरिका मा आज प्रयोग गरिन्छ भनेर याद गर्नुपर्छ केही प्रसङ्गहरू बाइबिल अर्थमा भन्दा फरक अर्थ भइरहेको बेला र। "
यो माइकल Karlendal उहाँले क्याथोलिक चर्च लागि देख गरिएको छ यसको जवाफ सक्दैन भनेर बुझ्न सकारात्मक छ। अरु पनि आफ्नो खोज उहाँलाई पछ्याएका छन् जो यस बुझ्न सक्छ। जवाफ तपाईं केवल प्रभु येशू ख्रीष्टमा पाउनुहुनेछ।
र तपाईं आफ्नो जीवन प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवित व्यक्ति पाउँदा तिनीहरूले सही फेला उत्तर मिल्यो!
एक मद्दत हुन
यस लेखमा तरिका Mikael Karlendal बाहिरै गर्न (उहाँले सार्वजनिक आंकडा छ) चाहनुभएको छैन, तर जसले यस्तो समस्या संग संघर्ष गर्दै छन् तिनीहरूले गलत हुनेछ भनेर मानिसहरू लागि उपयोगी हुन सक्छ।
हुन माइकल Karlendal लागि खुसी। यो एक साहसी र इमानदार उहाँले गलत थियो भनेर स्वीकार गर्न हिम्मत उसलाई गरेको छ।